(၇)လပိုင်းမိုးကြီးမှုတွင် Oita စီရင်စုမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားရဲ့ အလောင်းပြန်လည်တွေ့ရှိ !!!! - JAPO Japanese News
(၇)လပိုင်းမိုးကြီးမှုတွင် Oita စီရင်စုမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားရဲ့ အလောင်းပြန်လည်တွေ့ရှိ !!!!
ဟူး 09 Sep 2020, 9:44 မနက်
Kyushu ဒေသမှာ လူ ၈၀ ကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၇ လပိုင်းမိုးကြီးရွာသွန်းမှုကြောင့်၊ Oita စီရင်စုတွင်းရှိ မြစ်ရေစီးကြောင်းသို့မျောပါပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသားရဲ့‌အလောင်းကို ပြန်လည်တွေ့ရှိပါပြီ။
ယခုလ ၈ ရက်နေ့၊ Oita မြို့မှာစီးဆင်းနေတဲ့ Oita မြစ်ရဲ့မြစ်ရေစီးမှုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသားအလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ လူအရိုးနဲ့တူတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရှိပြီး မသင်္ကာ၍အနီးအနားလိုက်ကြည့်တဲ့အခါ၊ အောက်မေးရိုးကိုပါ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရဲအရာရှိများကလည်းစုံစမ်းနေပြီး သွားတွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံအရ Oita စီရင်စု Yufu မြို့နေထိုင်သူ Watanabe Tomoki (၅၄ နှစ်) ရဲ့အရိုးစုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Watanabe စံဟာ ထိုနေရာကနေ ၂၅ ကီလိုအကွာအဝေးရှိတဲ့ Hanaino မြစ်ပေါ်မှာကားနဲ့ ထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်၊ မိသားစု ၃ ဦးနဲ့အတူ ရေစီးကြောင်းနဲ့မျောပါသွားတယ်လို့ယူဆရပြီး အခြားမိသားစုဝင်တွေရဲ့အလောင်းကိုတော့ ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
(၇) လပိုင်းမိုးကြီးမှု သေးဆုံးသွားတဲ့လူတွေက Oita စီရင်စုတွင်း (၆) ဦးရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
Miyazaki စီရင်စုရှိ Shiiba ရွာတွင် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ !!!!
Oita စီရင်စုရှိ Oyama ဆည်ကြီးကိုမော်ကြည့်နေတဲ့ ‘Attack on Titan’ manga ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ရုပ်တုများ
မုန်တိုင်းနံပါတ် (၉) Kyushu မြောက်ပိုင်းသို့ချည်းကပ်လာပြီ !!!!!
ဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသကိုဦးတည်ပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပူချိန် 40 ဒီဂရီအထိအပူလှိုင်းဖြတ်နိုင်ခြေရှိ‌‌‌ !!!!!!
ဖြိုးပြောပြတဲ့ ဂျပန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနည်း !!!
(၃)ရက်နေ့အတွက် တိုကျိုမြို့ကူးစက်မှုအသစ် ၂၀၉ ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြု
Toshimaen ကစားကွင်းနေရာမှာ Harry Potter Studio Tour ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်မည် !!!!
အိုလံပစ်၊ အဆုံးမှာတော့ သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်သည့် အခြေအနေထိတိုင်…
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Door Phone တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုမှာ အနာဂတ်ကို ခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်
နှာခေါင်းကနေသွင်းမယ့်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး? ဆန်ကိုစားရုံနဲ့ ကိုဗစ်ကိုတွန်းလှန်မယ် ?
အိမ်တိုင်ရာရောက်ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူက PS5 ကို ခိုးယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့။ ထိုနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်သွားလဲ?
ဂျပန်လူမျိုးတွေ မကြိုက်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ချို့ရဲ့ အကျင့်လေးတွေ